Momba anay - Nanjing Liming Bio-products Co., Ltd.
Nanjing Liming Bio-vokatra Co., Ltd.
Nanjing Liming Bio-products Co., Ltd. natsangana tamin'ny taona 2001, ny orinasanay dia natao manokana tamin'ny famolavolana, ny famokarana ary ny fivarotana fitsapana haingana ho an'ny areti-mifindra indrindra ny STD. Ankoatra ny ISO13485, saika ny vokatra rehetra misy anay dia voamarika tamin'ny CE ary nankatoavina ny CFDA. Ny vokatray dia nampiseho fahombiazana mitovy amin'izany raha oharina amin'ny fomba hafa (ao anatin'izany ny PCR na ny kolontsaina) izay mandany fotoana sy mandany vola. Amin'ny fampiasana ny fitsapana haingana ataontsika, na ny marary na ny matihanina amin'ny fitsaboana dia afaka manangona fotoana betsaka hiandrasana satria mila 10 minitra fotsiny.
Izahay dia nandinika tsara ny fizotran'ny fiantohana kalitao sy ny fankatoavana ny fitsipika ankehitriny momba ny fitaovana fitsaboana amin'ny famokarana, fifehezana kalitao, fitehirizana, fitaterana ary fanohanana ara-teknika, fanaovana ny vokatra avo lenta hanompoana ny mpanjifantsika manerana ny izao tontolo izao.
Miaraka amin'ny areti-mifindra manerantany an'ny COVID-19, ireo firenena manerantany dia sahirana mamantatra sy mifehy an'io aretina io ara-potoana, ary namorona fitsapana serôlôjika sy molekiola manavao, tena mora tohina sy manokana ho fitsapana ny COIVD-19.
Ny tanjonay dia ny ho mpamatsy vahaolana ny vokatra POCT ary mitady izahay manantena ny hiara-miasa aminao hanao sary tsara ho an'ny fahasalaman'ny olombelona.
Tondro-potoana momba ny vokatra
Niorina ny orinasa ary lasa mpizara ny Bio Merieux sy Alere
Miova amin'ny fikarohana tsy miankina, fampandrosoana ary famokarana IVD, ary makà mari-pahaizana fisoratana anarana kilasy III, fanamarinana fisoratana anarana 1 kilasy II ary mari-pahaizana fisoratana anarana kilasy I navoakan'ny fanjakana misahana ny sakafo sy ny zava-mahadomelina.
Fahombiazana amin'ny fananganana sehatra teknolojika fikarohana molekiola
Nahomby tamin'ny famoronana kitapo fitsapana pnemonia coronavirus
Tonga mpiara-miasa amin'ny famatsiana mandritra ny fotoana maharitra ny valin'ny fitsapana kôlera haingana an'ny UNICEF ary nanao sonia fifanarahana fiaraha-miasa maharitra miaraka amin'ny orinasanay
Coronavirus ho an'ny fitsapana Covid-19, Kitapo fitsapana antigona Coronavirus, H. Pylori Ag Rapid Test dia mamantatra ny antigen, Vibrio Cholerae O1 / O139 Antigen Combo Fitsapana haingana, Kitapo fitsapana Igm / Iggrapid, Fitsapana haingana momba ny Coronavirus Ket,